Iapile endandinayo kaSteve Jobs ukuba iboniswe kumyuziyam eSeattle | Ndisuka mac
Iapile endandinayo kaSteve Jobs ukuba iboniswe kwimyuziyam yaseSeattle
I-Apple ayisiyiyo kuphela imveliso ethengisayo namhlanje kunye namahemuhemu aqinisekisa ukuba abanye babaluleke ngakumbi. I-Apple ingaphezulu koko kwaye iimveliso zayo ziya zibaluleka kule minyaka idlulileyo. Ngale nto uyakuthanda, sazisa inqaku elitsha elithetha ngeyunithi yeyiphi ikhompyuter yokuqala eyenziwe ngu-Apple, i-Apple I.
Ukuba ufundile kancinci malunga nembali yabantu baseCupertino, uyazi ukuba ekuqaleni bavelise inani elininzi Iiyunithi ze-Apple IOko kukuthi, kuthathelwa ingqalelo izibonelelo ababenazo ngelo xesha, kokubini ezomntu nezoqoqosho. Inyani yile yokuba u-CEO u-Steve Jobs ungumnini wenye ye-Apple I kwaye yeyona sifuna ukuthetha nawe ngayo namhlanje.
Kubonakala ngathi inkulu yeApple, uSteve Jobs, ifumene iyunithi yeApple I ephelisiweyo ukuya kuthi ga ngaphandle ibhekisa kwinto esiyiqhelileyo ukubona. Kule meko asinaso isiciko somthi esinegama elithi u-Apple oqingqiweyo kwaye kunjalo Ikhompyuter esikubonisa yona kweli nqaku yayiyunithi uSteve Jobs asetyenziselwa ukufumana ukuthengisa ngakumbi kwisixhobo sakhe sokuqala.
Kulo Iikhompyuter eziPhila: kwiMyuziyam + kwiiLebhu, ebekwe eSeattle, sinokuyithanda iyunithi yeApple I esithetha ngayo. Yimbonakalo yemisebenzi esetyenzisiweyo kumntu wokuqala nabathengi abanokubakho, kungoko kubaluleke kakhulu ukuba le yunithi iye yabanakho. Umlawuli wemyuziyam, ULāth Carlson, iqinisekisa ukuba yeyona khompyuter ibaluleke kakhulu ngalo lonke ixesha kwaye yiyo le nto ibaluleke kakhulu kwigumbi lonke elizinikele ekuboniseni iimveliso zeApple kwiminyaka yayo engama-20, oko kukuthi ukusukela ngo-1976 ukuya kowe-1999 kumboniso abathi bawubiza Umboniso weKhompyutha ka-Apple.
Okokugqibela, kufuneka sikuxelele ukuba le khompyuter ayikhange inikelwe lusapho lweMisebenzi kwaye kukuba xa imisebenzi yayishiya iApple ngo1985, injineli eyayisebenza eApple ngelo xesha ibizwa UDon hutmacher ukwazile ukubamba le yunithi kuqokelelo lwabucala. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, le njineli yasweleka kwaye nosapho lwayo yanikela ngekhompyuter kwimyuziyam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Iapile endandinayo kaSteve Jobs ukuba iboniswe kwimyuziyam yaseSeattle
Obunjani ubuhle beqhekeza
Ukujonga okutsha kuApple Park Minecraft Edition
Timork: Ixesha lokuSebenza, ixesha kunye nemisebenzi, cwangcisa imisebenzi yakho ngesi sicelo sitsha